China Manufacturer Colour Bright Colour Lip Gloss Private Label Glitter Shiny Lip Gloss Beauty Cosmetics Lipstick orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Weiti
Mpanamboatra loko marevaka molotra gloss manokana labozia famirapiratra mamirapiratra molotra hatsaran-tarehy tarehy tarehy lokomena
1. vidiny mifanentana amin'ny kalitao avo lenta
2. ny habetsahan'ny gloss vita amin'ny tarehy kosmetika azo ekena
3.Logo dia azo atao pirinty ho fangatahan'ny mpanjifa
4. Multicolor, na loko sy feno aza, ny toetrany, azo entina.
5. tantera-drano sy maharitra
6. Mora entina sy mitahiry
Mpivarotra 7.best amin'ny tsena eropeana sy amerikana
Fitaovana: ny lokon'ny molotra kosmetika misy lokony 100% akora avo lenta, tsy misy poizina, tia tontolo iainana, tontolo iainana
Malemy sy malefaka ary mirehitra izy, nolokoinao tamin'ny molotra moramora izany, handoko ny molotrao mandoko sy hamirapiratra mamirapiratra satin hamirapiratra gloss. Nisaraka ny borosy molotra tao anaty dobecase tsara, izay mahasalama sy mety kokoa. Tsy hitsitsy olona mihitsy ianao ary hamirapiratra ny fientanam-pitiavana amin'ny lokon'ny molotra manjelanjelatra.
Ny hatsaran-tarehy molotra farany: lokomena ranoka tsy manam-paharoa.
Ny formulaire maivana dia mipetaka amin'ny loko matevina ary rehefa apetraka amin'ny matte, famaranana tsy famindrana miaraka amin'ny herin'ny hery mahavariana dia mihombo ny loko.
Ny loko tena ilaina dia azo hanaovana irery na atambatra mba hamoronana loko tonga lafatra amin'ny fotoana rehetra.
Mampiasà contour molotra mifameno hamenoana ny bika aman'endrinao.
Manana ny orinasan-tsika manokana izahay, izay afaka manisy fonosana molotra, molotra, lokomena, pensilihazo volomaso, volomaso, pensilihazo volomaso, fantsom-boalavo, maso kely, mpanamory, vilany vovoka, boaty makiazy, spaonjy spaoro, fonosana aloky ny maso, boaty aloky ny maso miaraka amina fitoeran-tsakafo makiazy fitaratra, karazana kosmetika toy ny borosy makiazy, volomaso, curler amin'ny volomaso, mpanasa tarehy, sns.
1.We dia mpanamboatra matihanina
Vidiny ambany miaraka amin'ny kalitao avo lenta
4.OEM serivisy sy sary famantarana ny mpanjifa dia ekena
5. Izahay dia manodina ihany koa arakaraka ny santionanao na ny sarinao.
6.Soraka amin'ity entana ity dia mbola manana fomba hafa
7.we manana ny ekipa R&D sy ny fanaraha-maso kalitao
Fampisehoana ny vokam-bolo
Teo aloha: Fonosana marika manokana momba ny volom-boasary
Manaraka: Ambongadiny Oem Private Label Volo-fanamainana vovoka manaparitaka ny rafitra fanamainana loko vovoka manify
mpamatsy gloss molotra logo manokana
mpanamboatra gloss molotra
mpivarotra ambongadiny molotra
ambongadiny matte lokomena
Taratasy fanoratana marika manokana momba ny volom-bava mpivarotra ...
Fitaovana ambongadiny miboridana miboridana mazava tsy miankina ...
Fanitarana volomaso, lipgloss, Volomaso maso, kapoka mink, eyeliner, Mpivarotra volomaso,